IApartment yeNgxowa-mali eyodwa yeBhadi enoJongo loMlambo (A/C)
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCynthia
*Iyunithi yokuma wedwa yeyona ifanelekileyo ukuze uhlale wedwa* Eyakho indlu yabucala eyi-1BR enebhedi yenkosi kwindawo eguquliweyo eyimbali eyakhiwa ngo-1883. Iyunithi ibandakanya igumbi lokuhlala eliphakamileyo kunye nebalcony enembono entle yomlambo iKennebecasis. Ayifanelanga abantwana abancinci.
Iyunithi yabucala etofotofo, e rustic kwaye esebenza ngokupheleleyo eyayakhiwe ekuqaleni njengendlu yokukhathalela umnini wekhaya lethu kwibhadi eyimbali eyakhiwa ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800s. Eli gumbi likhethekileyo lizimele linazo zonke izinto eziluncedo zekhaya kubandakanya i-wifi ekhawulezayo, iApple TV, kunye ne-air conditioning. Kananjalo inezinyuko ezimbini ezithe qelele ngoko ke ayibafanelanga kakuhle abantwana abancinci okanye nabani na ongaqhubi kakuhle ngezinyuko. Ungalala 2 kamnandi kakhulu ebhedini yenkosi. Igumbi lokuhlala eliphakamileyo line-futon ekwazi ukulala abantu aba-1-2 abongezelelweyo kwaye kukho ibhedi enye yokuqengqeleka enokuthi ibolekwe ngesicelo kwaye isetyenziswe kwigumbi lokulala. Konwabele ukuphuma nokutshona kwelanga kwibalcony ejonge emlanjeni. Kufuphi kuzo zonke izinto eziluncedo zaseQuispamsis, eRothesay, naseSaint John okwangoku uziva ngathi uselizweni.
Le yindawo ezolileyo yosapho kwaye indlela ehamba phambi kweyunithi (ecaleni komlambo) yindawo edumileyo yokuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile. Malunga nokuhamba ngemizuzu eyi-15 ukuya kwi-Great Trail (Trans Canada Trail), okanye uqhube i-5 min ukuya kwindawo yokupaka kwaye ufikelele kumzila ukusuka apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Cynthia
Ikhaya lethu likufuphi ukuba ufuna nantoni na kodwa wahluke ngokupheleleyo ukuze ube nemfihlo eninzi. Sihlale kule ndawo iminyaka engaphezulu kwe-20 kwaye sonwabile ukucebisa ngeendawo zokuqhuba, iindawo zokuhamba intaba, njl.